On nov 15, 2019 8 611
Lasan’ny ekipa avy amin’ny vondron-tafika ENSOA- Antsirabe, na ny Sekoly fampiofanana manamboninahitra Lefitra, ny amboara teo amin’ny lalao iraisan’ny Faritany Miaramila voalohany na ny RM1, eto Antananarivo. Resiny tamin’ny isa 3 no 2 ny ekipa avy amin’ny R3A avy aty Betongolo.
Notanterahana omaly maraina, tety amin’ny kianja filalaovam-baolina, Akademia Miaramila (ACMIL), ny lalao famaranana. » Fair-Play, Fraternité », izay no lohahevitra nitondrana ny hetsika, izay santatra am-bava rano ihany, raha ny fanazavana nomen’ny jeneraly Rabenaivoarivelo Jean Claude, lehiben’ny fibaikoana ity Faritany Miaramila, voalohany. « Tanjona ny fanomanana Club Omni-sport RM1, ka nanombohana azy ny lalao baolina kitra. Mbola hivelatra amin’ny taranjam-panatanjahatena hafa ny hetsika », hoy ny fanazavana nomen’ity manamboninahitra jeneraly ity.
Ny mpilalao avy amin’ny ekipan’ny ENSOA, Antsirabe sy ny avy amin’ny RAAA, avy any Antananarivo, nanao ny lalao famaranana.
Ny lehiben’ny Etamazaoro Jeneralin’ny tafika Malagasy, ny GDI Rakotonirina Théophile kosa dia nanamafy tamin’ny lahateny fohy nataony, fa zava-dehibe ny fitaizam-batana eo amin’ny miaramila. » Na maro aza ny andraikitra sahanina, indrindra amin’ny fametrahana ny fandriampahalemana maharitra izay andraisan’ny vahoaka, tena ilaina ny fanatanjahantena tahaka izao », hoy izy.
Ny GDI Rakotonirina Théophile, lehiben’ny Etamazaoro Jeneralin’ny tafika Malagasy, nandaka ny baolina voalohany, ho fanombohan’ny lalao famaranana.
Marihina fa ekipa 15 tamin’ny vondrona 17 misy ao anatin’ny RM1 no nandray anjara tamin’ny lalao.